Zvokuita kana lubrication pfungwa rapera munguva kuvakwa? - China Qingdao CO-NELE Group
Zvokuita kana lubrication pfungwa rapera munguva kuvakwa?
Concrete Pombi marori vari zvinowanzoshandiswa zvikuru pakuvaka nzvimbo. Kudzidza kungoita kugadzirisa lubrication pfungwa kukundikana panguva kuvakwa kunogona kuvandudza zvikuru kuvakwa kunyatsoshanda.
The lubrication akajekerwa chesamende pombi rori vanofanira nguva dzose kuramba mashandiro lubrication. Kana mhosva kunoitika, kuchachinja kunowanzoitika mberi kuvakwa, uye ichi kwete chete kungaita zvokuimba kusakara. Saka sei kazhinji ndiyo lubrication pfungwa kukundikana chesamende pombi rori kunokonzerwa panguva kuvakwa? Zvakananga, pane vatatu pfungwa:
1. Bhuku lithium-inobva girisi pombi kutadza;
2. Chip mafuta separator kukurukurirana kwacho kana wakaremara;
3. Mumwe kana kupfuura pfungwa yacho lubrication pfungwa huru neduku kubereka kutigumbura uye yaikurudzira mugodhi ruoko vari kuvharidzirwa.
Nokuti pamusoro apa pombi rori lubrication pfungwa kukundikana, zvinotevera zvingaitwa dzinowanzoshandiswa:
1. Bvisa girisi nzira yokubudisa simbi nyere yacho girisi pombi, uye ipapo zunzai girisi pombi. Unowanikwa kuti girisi pombi anogona kazhinji pave girisi uye hunogona kungoparara kuzungunuswa, zvichiratidza kuti hapana dambudziko pamwe girisi pombi
2. nekukatanura lubrication pfungwa huru neduku kubereka zvigaro uye yaikurudzira mugodhi ruoko kuitira. Munguva disassembly muitiro, kana vakaona kuti imwe lubrication pfungwa yabviswa, ipapo girisi Pombi chakazunguzirwa uye anoshanda dzinowanzoona kuti achatongwa kuti lubrication pfungwa iri kuvharidzirwa.
Post nguva: Mar-10-2020